Kunamata Kunongedzera Kudhara Yako Kurota Jobho | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kudhara Yako Kurota Jobho
Kunamata Kunongedzera Kudhara Yako Kurota Jobho
Nhasi tichange tichishanda nemunamato zvinongedzo kuti uwane basa rako reroto. Maonero angu akadzidza anotiudza kuti vanhu vazhinji vanogadzikana nebasa ravasingadi. Ivo chete vanoita mabasa kuti vawane chikafu patafura yavo. Vanhu vazhinji vanogona kuzvirumbidza nekuva nehope dzavo basa. Dzimwe nguva, tinogona kuzvipa mhosva pahuipi hwehupfumi hwenyika uye neimwe nzira, tinogona kuzvipa mhosva nekuregeredza kwemunamato kune munhu ari kutsvaga basa.
Chokwadi chinoramba chiripo, isu tiri venyama vemweya uye zvemweya zvinodzora zvepanyama. Tinogona kushandura mafambiro echinguvana munzvimbo yemweya uye maprotocol akavhunika nekuda kwedu panyama. Ndakaona vanhu vazhinji vachiwana basa ravasina kukodzera, ndiyo nzvimbo yenyasha. Nepo vamwe vanhu vachidhakwa nematambudziko nekuda kwekuti mabasa avanoita haakwanise kuwana zvavanoda. Mwari vachiri mubhizimusi rekupa vanhu mabasa avo ekurota. Basa rinokwana kukwana kutarisira zvese zvaunoda, Mwari achiri kugona kuzvipa.
Chinhu chimwe chakasarudzika kuve nebasa reroto, mufaro uchave wakakurumbira muhupenyu hwemunhu akadaro. Murume anomuka mangwanani-ngwanani odzoka kumba pakati pehusiku kubasa kwaari kungoita nekuti haadi kugara asina basa, murume akadai haambofare. Nekudaro, kana iwe uine rako reroto basa, pane danho remufaro rinouya neizvozvo. Mwari vanokwanisa kupa basa. Hapana munhu anogamuchira chimwe chinhu kunze kwekunge chakapihwa kubva kumusoro. Mwari vachakupa iro basa. Iwe unongoda kuve une chinangwa mukukumbira kwako.
Izvi hazvireve kuti hupfumi hausi mumatambudziko. Nekudaro, iyo pfungwa yenyasha dzaMwari ndeyekuti inogona kusimbiswa zvakanyanya. Nyasha anovhura musuwo wakavharwa kwegore. Inoita mitemo nemirau yevanhu kukotamira pamberi peumwe murume. Kana iwe uchinyanya kuda imwe mhando yaJobho, ngatinamatei pamwe chete, Mwari zvirokwazvo achazviita zviitike Chinyorwa chinoti izvo zvinotarisirwa nevakarurama hazvizotapudzwa. Zvaunotarisira hazvizoparadzwe nezita raJesu. Bhuku ra Mateo 7: 7 Kumbirai, muchapiwa; tsvakai, uye muchawana; gogodzai, uye muchazarurirwa. Zvese zvaunoda kuti uite kukumbira uye uchapihwa kwauri.
Ini ndinokumbira nemvumo yedenga, rako reroto basa rinokuisa iwe muzita raJesu. Ndinoraira kuti Mwari vanokusanganisa iwe kune chaiko sosi, varume vefuma vachakuwana iwe muzita raJesu. Kana iwe uchinzwa kuti iwe unofanirwa kunamatira rudzi rwebasa, ngatinamatei minamato inotevera pamwe chete.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa kuti ndione rimwe zuva idzva. Ndinokutendai nekuti mave muridzi wangu uye nhovo yangu. Nenyasha dzenyu kuti hatina kupedzwa. Ndinokudzai imi Ishe Jesu nekuda kwenyasha dzenyu pamusoro pehupenyu hwangu, ndinoti zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinouya pamberi penyu nhasi kuzokumbira kupihwa basa. Ndinokumbira kuti tsitsi dzako dzizarure mikova mitsva yemukana kwandiri. Ndinonamata kuti kunyangwe pandinoenda kunotsvaga basa, mweya wako uchaenda pamberi pangu uye unokwidziridza nzvimbo dzakakwirira muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinoziva kuti hapana munhu anogamuchira kunze kwekunge yapihwa kubva kumusoro. Ndinonamata kuti musunungure maropafadzo muhupenyu hwangu. Ropafadzo rako rinozomisa protocol yemunhu, ropafadzo yako inozobvisa mirau nemirau yakaitwa nevanhu, ndinonamata kuti maropafadzo akadaro atange kunditevera nhasi muzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinoraira kuti simba renyu ribude uye mundi zivise nekugona munzvimbo dzese dzandarambwa ndinonamata kuti simba renyu rindipe chikonzero chekupembererwa muzita raJesu. Ini ndinoramba kurambwa, nyasha dzinozondiita mwedzi pakati penyeredzi, ndinonamata kuti musunungure kwandiri nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundibatanidze kune vanhu chaivo. Vanhu vamakagadzirira kundisimudzira muhupenyu, ndinonamatira kubatana kwemweya pakati pedu muzita raJesu. Ndinonamata kuti iwe ugare nevarume vakadaro vasina zororo kusvikira vandiwana uye vandibatsira muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinonamata kuti apo pandichaenda kunotsvaga basa, ndinonamata kuti imi kuvepo muende neni muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mundishongedze nenjere nenyasha kuti ndimire pakati pechaunga. Izwi renyu rinoti tinofanira kukumbira uye tichagamuchira, tinofanira kutsvaga uye tichawana, tinofanira kugogodza uye ichavhurwa. Ishe sezvo ndiri kuenda kunotsvaga rimwe basa riri nani, ndinonamata kuti mundibvumidze ndiwane rimwe muzita raJesu Ndinokumbira kuti nyasha nesimba renyu zviende neni. Mikova yese yakavharirwa kwandiri, ndinoivhura nesimba muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinokumbira kuti mundipe nyasha. Chinyorwa chinoti kana nzira yemunhu ichifadza Mwari, Iye anomufadza kuti awane nyasha pamberi pevanhu. Ndinonamata kuti nyasha dzako dziende neni muzita raJesu. Kana vanhu vachindiona, ivo ngavaone kubwinya kwako. Ini ndinotaura basa rangu reroto muchokwadi muzita raJesu.
Kudenga Ishe, ndinokutendai nenyasha dzamakandipa. Ndinotenda nekuti wanzwa minamato yangu, ndinokutenda nekuti ndichagovana uchapupu hwangu munguva pfupi iri kutevera, Ishe ngarikudzwe zita renyu muzita raJesu. Ishe ndinoshandisa munamato uyu senzira yekuonana nevamwe vanhu vane nyaya yakafanana, ndinonamata kuti muvabatsire uye muvapindure pavanokudanai muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Pfungwa Kukunda Makaro
inoteveraKunamata Kunongedzera Kupokana Nehuipi Huporofita
Dismas Lugoye June 22, 2021 Pa 8: 23 am
Mtumishi wa Mwari Unoshambadza Sana Kwazvo somo Zvenyu zvikuru zvekushandisa
Odogwu June 30, 2021 Pa 7: 46 am
Ndinotora minamato iyi muZita raJesu. Ameni Uye Ameni
Maggie Chikunguru 2, 2021 Na9: 54 pm
Ndinoti munamato uyu muzita raJesu
Kunyengeterera Rudzi rweSierra Leone